Dịkwuo nkata - accessnweta Google ọtụtụ netwọkụ nke ndị na-emepụta kọmpụta iji nyere gị aka ịba ụba nkata na ụkwụ ụkwụ na ụzọ ọhụrụ.
Nkesa ebumnuche - ike nke ndi ahia inye gi ohere inye ndi ahia aka ha. Jiri advavụ mgbasa ozi nke Google na gbatịa iru nke coupon ezubere iche gafee web Ngosipụta Ngosipụta Google.
Versdị ịkwụ ụgwọ kwa-mgbapụta nke Zavers na-eme ka o doo anya na enweghị ụgwọ maka nkesa, mmetụta, ma ọ bụ ịchekwa - naanị ịkwụ ụgwọ mgbe onye ahịa gbapụtara akwụkwọ ikike maka ngwaahịa a kwalitere. Ihe ngosi Google gosiputara na netwọkụ mgbasa ozi nke kasịnụ, na-eru ihe karịrị iteghete n’ime mmadụ iri na US